IiHacks zemfazwe zale mihla 🥇 Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
NGAMANZI UKUSHUBA KWIMFAZWE
Imfazwe yanamhlanje ngumqhubi ogcwele isenzo oza kubeka izakhono zakho kuvavanyo lokugqibela. Dlula ngemibala ephaphazelayo ngokufumana ukufikelela kwiiHacks zethu zeMfazwe zangoku, apha eGamepron!
Sele uthenge i-MW Hack? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Phambi kokuba uthenge ii-COD zangoku zeMfazwe, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu IMfazwe yanamhlanje Hacks
IiHacks zemfazwe zangoku, iAimbot, iNorecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Ubuninzi beRage Hack
SC lomnqweno yimfumba
Thenga IMfazwe yanamhlanje IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha umdlalo ofuna ukuwudlala ngokukhetha ekukhetheni kwezitshixo zemveliso
Khetha ukuba yeyiphi i-hack ehambelana nezona mfuno zakho zibalaseleyo, sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo apha kwiGamepron!
Zonke iintlawulo zethu ziphathwa kusetyenziswa iprosesa eyodwa yokuqinisekisa ukhuseleko lomsebenzisi
Ukufumana ukufikelela kwiqhosha lakho kunye nokukhuphela iiHacks zemfazwe zale mihla!
Fumana ukufikelela kwiqhosha lakho lemveliso kwaye ukhuphele ukukopela ngokufumaneka
Kutheni usebenzisa i-Gamepron yeziMfazwe zale mihla?
Ngenxa yenqanaba lokuncipha kwenkxaso yeMfazwe yanamhlanje, asikaboni nto intsha kumdlalo ngaphandle kokukhutshwa okumangalisayo kweemephu ezimbalwa phantse kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo. Ndiyathemba ukuba siza kubona uhlaziyo olungephi lomdlalo ngaphambi kokuba inkxaso ilahlwe ngokupheleleyo, ke sigcina iminwe yethu iwele.
Enye yezona zinto zimangalisayo malunga nalo nyaka kukuba iMfazwe yanamhlanje ekugqibeleni yabona umxholo emva kwexesha elide kangaka. Iimephu ezimbini ezintsha zikhutshiwe kwiimfazwe zanamhlanje, emva kokuba zikhutshiwe kumdlalo emva kokuba abantu bezifumene kwimidlalo yesiko. Ezi mephu zimbini yiAl-Raab Airbase kunye noMjelo wamanzi.
I-Call of Duty Modern Warfare iye yatyeshelwa kalusizi okoko kwaphuma iMfazwe ebandayo ye-Black Ops, kodwa ubuncinci izixhobo zomdlalo ziyafumana ingqalelo eWarzone. Isoftware yeRaven ngoku isebenza ekuqinisekiseni ukuba izixhobo zeMfazwe zangoku ziyahambelana nokusebenza kwemipu ye-BOCW.
Umnxeba woXanduva: IiHacks zemfazwe zangoku ziyafumaneka ngobuninzi kule mihla, kodwa ufumana kangaphi isixhobo esingasifanelanga xabiso? Xa ufuna ukwazi ukuba ufumana imveliso ekumgangatho ophezulu, iGamepron yeyona ndawo unokuthembela kuyo - sikuvumela ukuba uthenge ukufikelela kuyo yonke imidlalo oyithandayo ngexabiso elifanelekileyo. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa sinezinto ezininzi abanokuthi abanye abanikezeli banethemba lokuzibandakanya kwiiHacks zabo zeMfazwe zangoku! Kukho izigidi zabadlali abangena kwi-Call of Duty: Iiseva zemfazwe zangoku mihla le, kodwa bambalwa kakhulu kubo abaza kusebenzisa amandla akhoyo apha eGamepron. Unokuba ngumntu osebenza yedwa xa ukhetha ukukopela ngeGamepron,
Yenza utshintsho obukade ulikhangela lonke eli xesha ngokufumana ukufikelela kukhetho lwethu olubanzi lweeMfazwe zale mihla. Abahlobo bakho kunye nabo udlala nabo ngekhe baphinde babhekise kuwe njengo "khuhla", kwaye baya kukhawuleza babone ukuba itshintshile indlela! Unokuba yinkosi yeMfazwe yangoku, nokuba uzisebenzisa kweziphi izixhobo; Nokuba ufuna ukudlala kwi-Intanethi okanye ungene kwindawo encinci yeWarzone, sinayo yonke into oyifunayo ukuze uqhakaze njengomdlali.
I-Gamepron inabaphuhlisi abaninzi abaziingcali, zonke ezo ziye zagqogqa okanye zaphuhlisa izixhobo kwixesha elidlulileyo. Amava akho buqu yinto esifuna ukugxila kuyo xa sidibanisa eli qela, ke sisebenze nzima ukwenza izixhobo kunye nokusebenzisana nabanye babaphuhlisi abathembekileyo kushishino. Ngenxa yoko, siyakwazi ukuzisa abathengi be-Gamepron eyona nto ibalaseleyo, nokuba uqhele ntoni! IiHacks zemfazwe zangoku ziya kuba yimfuno ephezulu ngoku nakwikamva elibonakalayo, kodwa ukuba awuzithengi kwindawo elungileyo, unokuzibeka emanzini ashushu.
Ukhuseleko lwabasebenzisi bethu alusoze lwatyeshelwa apha kwiGamepron, sifuna ukuba ugcine yonke iakhawunti oyiceba ukukopela nayo. Nokuba wenza iakhawunti yesmurf okanye ukopela ngeyantlandlolo, akukho sidingo sokukhathazeka malunga nokuvalwa. Ngokukhuselwa ngokukhethekileyo kokuchasana nokukopela kunye neempawu ongazange uzibone ngaphambili, isizathu sokuba ufune ukusebenza ne-Gamepron Modern Warfare Hack kukuba yeyona nto intle owakhe wayibona. Yinto elula nje leyo!
Iimfazwe zanamhlanje iWall Hack (ESP)
Ulwazi loMdlali weMfazwe wangoku i-ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Imfazwe yanamhlanje Into ye-ESP enezihluzo
Imfazwe yangoku iAimbot
Isilumkiso silumkisa utshaba lwangoku
Imfazwe yangoku yemowudi yokutsiba kakhulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza).
Imfazwe yanamhlanje ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
Iimfazwe zangoku zibuyekeze umbuyekezo
Ngokufanelekileyo IMfazwe yanamhlanje yimfumba Iimbonakalo
Ungabona izinto ezininzi usebenzisa i-Modern Warfare ESP yethu, kubandakanya neentshaba ezifihle ngasemva kwendawo eqinileyo ne-opaque!
Awuzukukwazi ukubona intshaba kuphela kwiindawo eziqinileyo / ezi-opaque, kodwa unokubona amagama abo, imivalo yezempilo, nokuba ungakanani umgama wabo.
Ukuphanga kunye nokufumana i-claymores akukaze kube lula, njengoko unokuvula i-Item yethu ye-ESP ngezihluzi ukuze ubone ukuba yintoni elele ngasemva kweengcango.
Awusoze uphinde uphuthelwe enye kwakhona! Nika amandla i-Aimbot yeMfazwe yanamhlanje kwaye uthathe iitalente zakho ziye phezulu kwiibhodi zeenkokheli zomdlalo.
Umkhondo wangoku weBullet track (esebenzayo kumgama omfutshane naphakathi)
Ukulandela umkhondo weBullet kuluncedo olukhulu kwitayitile enje ngeMfazwe yanamhlanje, kwaye siyinikela kwesi sixhobo (ilungele umgama omfutshane kunye nophakathi)
Umyalezo wesilumkiso owenziwe ngokwezifiso uzakubonisa kwiscreen xa utshaba lujolise kuwe, okanye lwenzeka kufutshane nomsebenzisi
Imfazwe yangoku yemowudi yokutsiba kakhulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza)
Yenza i-Super Jump Mode kwaye usinde ekuweni okunokubulala abanye abadlali! Ukulahla phezulu kunye nokuhambisa ukubhubha ngeeMfazwe zethu zale mihla zeMfazwe.
Imfazwe yanamhlanje ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
Ukubekwa phambili kwethambo kunye nolunye useto olulungelelanisiweyo lukhona xa ukhetha ukusebenzisa iMfazwe yangoku yeAimbot, phakathi kwezinye izinto ezikhoyo ngaphakathi.
Imfazwe yanamhlanje aimbot iitshekhi ezibonakalayo
Ukutshekishwa okubonakalayo kunokusetyenziswa ngelixa i-Modern Warfare Aimbot isebenza, ikuvumela ukuba uqinisekise izithonga ngokungxama nangokuchaneka- akukho mfuneko yokuqikelela!
Ukuphinda ubuye ngaphezulu kokuphelisa ukubulala kuwe ngaxa lithile, kodwa akusekho njalo! Yahlule ngokusebenzisa i-recoil compensator yethu.
Yiba ngoyena mdlali uQhelekileyo weMfazwe kwiPlanethi
Nangona mhlawumbi uqhelile ukuphoxeka ngeeMfazwe zanamhlanje iiHacks, sizama ukutshintsha imozulu ejikeleze ubuqhetseba kwezi ntsuku. Sinika abasebenzisi bethu i-100% engafumanekiyo kwaye ibonakalise ngokupheleleyo iiHacks zeMfazwe zangoku. Ukuba ukhe waphupha ngokuba ngumdlali obalaseleyo weMfazwe yanamhlanje kwiplanethi, yazi nje ukuba ayifikeleleki- ngokufumana ukufikelela kwiiHacks zakho zangoku zeMfazwe, usendleleni yokufezekisa loo njongo. .
Iimfazwe zanamhlanje ezidumileyo iiHacks kunye nokukhohlisa
Imfazwe yangoku i-ESP kunye neWallhack
Ezinye iiHacks zemfazwe zangoku kunye nokukhohlisa
Sisebenzela abathengi bethu ngokubanika ukufikelela kwezona ziNdawo ziQinisekileyo zaMfazwe zale mihla kunye nokukhohlisa ezinokufunyanwa kwiwebhu. Ngelixa abanye abaphuhlisi behack beya kunciphisa inani leempawu ezikhoyo ngaphakathi kwezixhobo zabo, asizukubalandela ngendlela enye. I-Gamepron imalunga nokwenza kunye nokudibanisa abasebenzisi kwiifayile ezibonakaliswe ngokupheleleyo, zonke eziya kubandakanya ukuthanda kweMfazwe yangoku iAimbot, i-ESP, iWall Hack, kunye nezinye izinto eziluncedo. I-WinThatWat izakutshintsha indlela ojonga ngayo iihacks kule mihla, siqinisekile ngayo! Ukuba ukhe wafuna ukufumana amandla okugqibela ngelixa udlala iMfazwe yangoku, uze kwindawo elungileyo.
Nangona unokusetyenziselwa ukubona nje i-aimbot kunye nodonga olukhoyo okwangoku, sinokuninzi ngakumbi kunokunikela-ke ulinde ntoni? Joyina usapho lweGamepron namhlanje kwaye ube lutshaba oloyikekayo kwabanye kwiMfazwe yanamhlanje.
Sebenzisa i-aimbot yethu yemfazwe yangoku akulunganga, ukutsho nje okuncinci. Akunakuxelelwa ukuba mingaphi imatshisi oza kuyiphumelela ngokulandelelana ngale nto iyenziweyo, ungaya kwindawo yokuphembelela uwonke-wonke kwaye uphumelele. Xa unokukhuphisana ngokuchasene neqela liphela kwaye uphathe iirandi ukuze uphumelele ngokwendalo, sele uyazi ukuba kungavakala njani- ngoku crank ukuba uziva uphezulu kwaye uyakuqonda ukuba kunjani ukusebenzisa iMfazwe yethu yanamhlanje iAimbot. Unako ukujikeleza iikona ngaphandle kokukhathazeka xa kusebenze ii-cheats zethu, njengoko i-Aimbot iza kuphunga nayiphi na ingxaki phantse kwangoko. Akukho mntu kwiplanethi onokugcina into ekhawulezileyo ejolise ngaphakathi, ngakumbi ukuba uvule ukubulala kwangoko okanye useto lwangaphambili lweThambo.
Kukho into kuwo wonke umntu obandakanyiweyo kwiMfazwe yangoku yeAimbot, ke ukuba uyafuna ukugcina izinto zilula okanye ufuna amava aqhelekileyo, i-Gamepron inayo yonke into oyifunayo.
Ngokusebenzisa iMfazwe yethu yaNgoku ye-ESP kunye neWall Hack, uya kunikwa ukufikelela kumagunya ekunokwenzeka ukuba awuzange uwaqwalasele ngaphambili. Ukukwazi ukubona amajoni otshaba ngokusebenzisa indawo eqinileyo kunye ne-opaque kuyanceda, kodwa sisiqalo nje-siyakuvumela ukuba ubone izinto, ezinje ngezixhobo okanye iziqhushumbisi. Ungajonga indawo ekuliwa kuyo ngokugcina ukuba zeziphi na iintshaba ezisebenzisa ezona zixhobo zinamandla, kunye nokuba zeziphi na ezigxumeke inkampu kuzo - ungabona amagama abadlali, ibha yezempilo, kunye nomgama wabo neMfazwe yanamhlanje ye-ESP kunye neWall Hack.
Njengokuba besesitshilo amatyeli amaninzi ngaphambili, ungalibetha lonke iqela kunye nawe ngeziMfazwe zanamhlanje zeMfazwe ezikhohlakeleyo. Imfazwe yangoku ye-ESP kunye neWall Hack inqaku lokukhohlisa kwethu linoxanduva okanye uninzi lwempumelelo, kuba ngekhe uphinde uhlaselwe ungalindelanga.
Stalk utshaba lwakho njengexhoba abalulo ngokuvula umsebenzi weFootprints kwaye uye emsebenzini. Banokukukhokelela ekubuyeleni kwabanye abadlali beqela labo! Eyona nto iluncedo ngakumbi kwiimowudi ezinje ngokuKhangela kunye nokuTshabalalisa, umnxeba wethu woXanduva: Imfazwe yanamhlanje yokuHacker kubandakanya izinto ezithandwayo zoMonakalo oMkhulu kunye neeHacks zomgama ngokunjalo. Unokwenza ukuba uMonakalo oMkhulu upakishe inqindi enkulu nangayo yonke imbumbulu egxothiweyo, ebangela ukuba iintshaba zakho zisasazeke okanye zihlale nje apho zithathe okuzayo kubo! Umgama wokuqhekeza uluncedo ngakumbi kwabo bathanda ukuhlala emva kwaye bathambekele, njengoko niza kwazi xa utshaba lusondele ngokwaneleyo ukuba lungenelele.
Nantoni na oceba ukuyenza ngeHack War War yethu ayinangxaki, njengoko siza kukunika ukufikelela kuwo onke amanqaku ekufuneka ugqwesile. Nokuba unezakhono kumdlalo awenzi mahluko, kuba kusekho into ekufuneka ibekhona kwitekhnoloji yakho enokuphuculwa kuyo.
Ukuba kukho enye into onokuba nethemba lokuyibona ibandakanyiwe kwiiHacks zethu zeMfazwe zangoku, ungakhathazeki! Sisoloko sihlaziya izixhobo kunye nentsebenziswano yokwenza eyona mveliso inokwenzeka, kwaye ngamanye amaxesha oko kunokuthetha ukwazisa izinto ezintsha. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa zonke iiMfazwe zethu zangoku zeMfazwe ziya kuza nge-100% zingafumaneki. Ezinye iinkampani azinakho ukubanga ukuba zinika iihacks ezingafunyanwanga, njengoko zingazikhathazi ngento ekuchasayo. Ayisiyongxaki yokulwa ukukopela kuphela, kodwa yenye yezona zinto ziphambili apha eGamepron.
Iiakhawunti zakho azikaze zonakaliswe xa ukhetha ukugcoba nathi, kwaye uxolo lwengqondo kuphela lwanele kwabanye abantu. Kwabanye, yazi nje ukuba kusekho ukuthanda i-2D Radar kunye nezinye izinto ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuthenga. Ngaba wakha wazibuza ukuba yeyiphi eyona Mfazwe yokugqibela yeli xesha iHacks kunye nokukhohlisa kungabonakala njani? Ewe, ngoku uyazi!
Iimfazwe zanamhlanje iiHacks imibuzo
Kutheni le nto iiMfazwe zangoku
Abantu bayaqhubeka nokuza kuthi ngeeMfazwe zabo zale mihla zeMfazwe kuba sifumana umsebenzi ngokufanelekileyo. Isikrini asixinwanga lulwazi olungenamsebenzi kwaye i-aimbot igudile kwaye yendalo, zonke izinto ezibandakanyiweyo kwimfumba yethu yeMfazwe yanamhlanje zaphunyezwa ngokugqibeleleyo. Kungenxa yoko le nto kufuneka uyisebenzise, ​​kwaye kutheni abanye beqhubeka besenza njalo!
Kutheni iMfazwe yethu yangoku iAimbot
I-aimbot enkulu inokwanela abanye abantu, kwaye kuphela kwento abaya kuyidinga. Xa uqonda iimephu kwaye wazi apho abantu bahlala khona, ungathembela kwi-Modern Warfare Aimbot ukusingatha lonke utshaba ngokungxama-nditsho ii-noobies zinokuphumelela xa i-Modern Warfare Aimbot isebenza! Awudingi ukuba ube nesakhono ngokwendalo ukuze ube nefuthe kwiMfazwe yangoku.
Kutheni iMfazwe yethu yanamhlanje i-ESP
Kuya kufuneka usebenzise i-Modern Warfare ESP kuba sikunika iindlela ezininzi ezahlukeneyo ze-ESP ukuze usebenze nazo. Awuzukubona ukhetho lwesiqhelo lwe-ESP yamathambo omdlali kunye nezixhobo zabo ezinokubakho, siye ngaphezulu nangaphaya kwesiqhelo ukukunika ulwazi lwe-ESP kangangoko kunokwenzeka. Ulwazi oluthe kratya ekufuneka usebenze nalo, ngcono!
Kutheni iMfazwe yethu yanamhlanje iWallhack
Abakhampasi baya konakalisa umnxeba wakho woXanduva: Amava emfazwe yangoku kwindawo enye okanye enye, kwaye kulapho xa uhlawulwa ngokusebenzisa i-War War yanamhlanje. Ukuchonga abanokuthi babe ziinkampu okanye ukuziphindezela kumntu osele umise inkampu ekufeni akuzange kube lula oku. Ukudityaniswa kunye nazo zonke ezinye izinto eziluncedo ezibandakanyiweyo ngaphakathi kwiiMfazwe zanamhlanje zokukhohlisa, akukho kuncinci umchasi anokukwenza ukumisa ukubhubha kwabo okungenakuphepheka.
Kutheni iNorecoil yethu yeMfazwe yangoku
Ukuphinda ushiyeke kuya kubakho ngexesha lokulwa kompu, kwaye kuya kukubulala ngaphezulu rhoqo kunoko. Ngenxa yoko, similisele inqaku leNoRecoil ngaphakathi kwiiMfazwe zethu zale mihla - awusayi kuphinda ulwe nobuchwephesha bomdlalo, ungakhomba kwaye udubule ngokuthanda kwakho! Ungasusa ezinye izinto ezininzi ngaphezulu kokuphinda ubuye, kwaye yiyo loo nto yenza ukuba uphawu lwethu lokususa lubalasele.
Ungazikhuphela njani ezona hacks ziMfazwe zale mihla?
Unokuzikhuphelela ezona hacks ziMfazwe zangoku ngokuthenga ukufikelela kuzo ngesitshixo semveliso kwiGamepron. Ngelixa singasoloko siphuhlisa iihacks ngokwethu, sisebenze nzima ukuqinisekisa ukuba sisebenzisana kunye nabanikezeli abathembekileyo abanokujikeleza. Nokuba kungoku okanye ngokukhawuleza emva kokuthenga, ukuthenga isitshixo semveliso kuthi kuhlala kulungile.
Kutheni le nto Imfazwe yakho yangoku ixabisa kakhulu kunezinye
Ukuhlala ungafumaneki ngelixa ukopela kwiMfazwe yangoku kunzima kunokuba uninzi lunokucinga, njengoko bonke ababoneleli benoluvo olwahlukileyo ngalo mbandela. Sifuna ukuba ukhuseleke ngangokunokwenzeka ngelixa ukopela, yiyo loo nto ke sinenkqubo ekhethekileyo yokukhusela ukukopela ukugcina iiakhawunti zakho zikhuselekile. Sikwanenani eliqingqiweyo leendawo zokubeka ezifumanekayo kwiiHacks zethu zeMfazwe zangoku, ezenza ukuba kufike kuqala, kuqala kusebenze.
Sinikezela ngamaqhosha emveliso ngohlobo lwamaxesha ahlukeneyo ahlukeneyo, konke oku kuya kukuvumela ukuba ube namava wethu eMfazwe yangoku iHacks ngokuguquguqukayo. Unokukhetha ukuthenga isitshixo semveliso yemihla ngemihla, yenyanga, okanye nokusetyenziswa konyaka ukuba ungathanda! Asizukunyanzela abasebenzisi bethu ukuba bazibophelele kwixesha elingakhange balidinge, yiyo loo nto abantu beqhubeka nokukhohlisa ngeGamepron.
Kuhle IMfazwe yanamhlanje yimfumba Iimbonakalo